Kintana roa: inona avy ireo, toetra sy zava-dehibe | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Portillo Alemanina | 15/02/2021 10:36 | astronomia
Manerana an'izao rehetra izao dia fantatsika fa misy kintana an'arivony tapitrisa. Na izany aza, misy ny sasany fantatra amin'ny hoe kintana roa. Ny voalohany dia hitan'i Benedetto Castelli tamin'ny 1617. Izy dia mpianatr'i Galileo ary nahita ireto karazana kintana ireto noho ny nanondroany teleskaopy tamin'ny kintan'ny Orsa lehibe fa any an-danitra toa akaiky dia akaiky nefa tsy miray ara-batana. Ny kintana dia Alcor sy Mizar.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny toetra sy ny maha-zava-dehibe ny kintana roa sosona.
2 Naoty Double Star
3 Kintana roa sosona
4 Rafitra mimari-droa sasany
Rehefa mandinika ny lanitra isika dia mankany amin'ny an'ny kintana isan-karazany. Manana planeta, nebulae, vahindanitra, cluster ary kintana roa sosona isika. Gaga i Benedetto Castelli rehefa namakafaka ny Mizar izy fa hitany fa manana olon-tiana izy. Ho an'ity mpiara-miasa ity io no heverina ho kintana mimari-droa voalohany hita. Taorian'io, kintana roa be izao no hita.
Mba hahalalana bebe kokoa ny lafiny ara-batana amin'ny kintana roa, andao hojerentsika hoe inona ireo toetra mampiavaka azy. Mora ny mianatra manavaka ny optika sy ny dozika ara-batana. Ny optika roa sosona dia ireo kintana izay toa niaraka nefa ho an'ny vokatry ny fomba fijery fotsiny. Tsy tena tafakambana ireto kintana roa ireto. Fa kosa, ny doble ara-batana dia rafitra kintana roa na maromaro mifamatotra ara-batana ary mihodinkodina manodidina ny ivon-toerana iraisana.
Ho an'ny mpandinika iray, ny fahaizana manavaka tsara ny kintana izay mitambatra ary misy effets optique, dia asa sarotra. Na izany aza, asa lehibe ho an'ny astronoma izany.
Naoty Double Star
Andao hojerentsika hoe inona avy ireo toetra mampiavaka izay manasokajy ny kintana roa. Ny fomba fanasokajiana azy ireo dia araka ny fomba izay nampiasaina hahitana azy ireo. Andao hojerentsika hoe inona izy ireo:
Visuals: dia ireo izay azo zahana ara-optika ara-pahitana na amin'ny sary.
Astrometric: Amin'ity karazana kintana roa ity dia kintana iray monja no hita, fa amin'ny fihetsiny manokana dia tsoahina fa manana namana izy.
Spectroscopic: Azo atao ihany ny mamantatra ireo karazana kintana ireo amin'ny alalàn'ny fandinihana ny hazavany.
Eclipsing na photometric: tsikaritra izy ireo raha azo ankasitrahana ireo fiovana maivana. Ireo fiovana maivana ireo dia mitranga rehefa mandalo eo alohan'ny mpiara-miasa ny singa iray.
Ny fisarahana sy ny halehiben'ny kintana roa dia zava-dehibe amin'ny fandinihana. Ny fisarahana zoro dia omena ao anatin'ny segondra arc ary io no manondro ny elanelana misy eo amin'ireo kintana roa. Etsy ankilany, ny haben'ny heriny dia milaza amintsika ny famirapiratan'ny kintana tsirairay. Arakaraka ny maha kely kokoa ny isa nomen'ny habe azy no mamiratra ny kintana. Ankoatr'izay, tsy tokony hohadinoina fa ny fandinihana ireo kintana ireo dia miankina amin'ny fahamarinan-toerana. Ary koa Miankina amin'ny kalitaon'ny ekipa mpandinika sy ny toerana misy antsika izany. Ireo miovaova rehetra ireo dia mamaritra ny fehin-kevitra farany ambony mety hananan'ny teleskaopy. Ny fandinihana ny kintana roa dia mamela anao hampitaha teleskaopy ary hahafantatra ny kalitaon'ny tsirairay avy.
Kintana roa sosona
Hanao lisitra kely izahay miaraka amin'ireo kintana roa sosona malaza amin'ny lokony, ny famirapiratany na ny tantarany. Izay rehetra hotononinay dia azon'ny amateurs jerena. Tsy mila manam-pahaizana ianao na manana fitaovana tsara vao afaka mandinika ireo kintana sarobidy ireo.
Izy io dia iray amin'ireo kintana roa malaza indrindra amin'ireo mpankafy ny astronomia. Ary izy io dia manana mifanohitra loko manaitra satria ny iray amin'ireo singa dia volomboasary ary ny iray hafa manga. Mora be ny toerana misy azy, satria izy no kintana mamirapiratra faharoa any Swan. Ireo toetra ireo dia mahatonga an'i Albireo ho iray amin'ireo malaza indrindra. Mampalahelo fa vao haingana ny zanabolana Gaia dia naneho fa tsy rafitra binary izany, fa mpivady optika kosa. Toa misy ifandraisany amin'ny fahitana fotsiny izy ireo fa tsy izy ireo.
Talohan'izay dia niresaka momba an'i Mizar ho iray amin'ireo singa ao amin'ny Big Dipper izahay. Ny mpandinika manana maso tsara dia afaka manavaka tsara ny kintana afovoany amin'ny rambon'io antokon-kintana io ary hahita fa rafitra roa io. Alcor sy Mizar no kintana roa miara-mihetsika eny amin'ny habakabaka. Tsy fantatra amin'ny fahazoana antoka tanteraka raha rafitra binary na hoe mpivady optique fotsiny.
Ny fisarahana eo amin'ireo kintana roa ireo dia ampy hahafahany manavaka azy amin'ny masony mitanjaka. Fatra fandrefesana ny halaviranao afovoaho ireo kintana roa ireo izay misy taona fahazavana 3 avy. Lavitra loatra ity halavirana ity ka tsy hieritreretana fa mifampiresaka gravitialy ireo kintana ireo. Ny tsy fahazoana antoka amin'ny refy dia malalaka be ka mety ho akaiky kokoa noho ny eritreretintsika. Na ahoana na ahoana, Mizar dia rafitra roa mora jerena ary tsy mila manana fahalalana loatra ianao vao afaka manao izany.
Rafitra mimari-droa sasany
Ilay Pole Star lehibe dia rafitra telo. Polaris A sy Polaris B dia namorona rafitra binary izay mora ny manavaka azy amin'ny teleskaopy rehetra. Misy kintana iray hafa koa izay ao anatin'ny rafitra iray fantatra amin'ny anarana hoe Polaris AB. Saingy, tsy azon'ny mpankafy izany, satria tamin'ny 2006 no nahitan'ny teleskaopy hubble.
Ity dia kintana iray mamirapiratra indrindra ao amin'ny antokon-kintana Gemini. Manafina rafitra kintana enina izay manana kintana roa lehibe indrindra izy ary fantatra amin'ny anarana Castor A sy Castor B.
Izy no kintana fahatelo mamirapiratra indrindra ao amin'ny antokon-kintana Andromeda. Tsy isalasalana fa iray amin'ny kintana tsara tarehy sy mora indrindra izy mahita an-danitra. Mila mampiasa teleskaopy fotsiny ianao dia afaka mahita rafitra roa misy fahasamihafana lehibe amin'ny loko. Ary ny singa fototra dia misy loko eo amin'ny mavo sy volomboasary ary ilay mpiara-miasa dia mampiseho loko manga somary mifanohitra. Mitovy amin'ny Albireo izany fa mifanakaiky kokoa izy ireo.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny kintana roa sy ny toetrany ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » astronomia » Kintana roa
Tendrombohitra avo indrindra eto an-tany